उपभोक्तालाई नै छैन वास्ता, राेकिएन ठग्ने ठगिने क्रम | eAdarsha.com
पोखरा, १९ फागुन । कास्की लुम्ले काँडेको शुद्ध मह भनेर बेच्दै हिँडेको टोली केही समय अगाडि पस्र्याङमा भेटियो । जबकी लुम्लेमा मौरी नै हुँदैन । तापक्रमकै कारण त्यहाँको उचाइमा मौरी बाँच्नै सक्दैन । उपभोक्तालाई यो कुरा थाहा छैन, चिसो ठाउँको मह मिठो हुन्छ भनेर किन्न झुम्मिन्छन् । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक नारायण आचार्यले त्यो टोलीलाई भेटे । आफ्नो परिचय नखुलाई आचार्यले उनीहरुलाई पहिलो पटकका लागि भन्दै सम्झाइ बुझाइ पठाए ।
१ उपभोक्ताले बजारको पसलबाट शक्तिबद्र्धक औषधी भनेर सानो पुरियालाई ३ हजार रुपैयाँ तिरे । त्यसमा न उत्पादन मिति थियो, न कुनै लेबल टाँसेको, न त कुन कुन वस्तु मिसाएर बनाएको हो भन्ने जानकारी नै । घरमा लगेर खाँदा त मुखभरि घाउ आयो । ती उपभोक्ताले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयमा फोन गरेर गुनासो गरे । सरकारी निकायले बजार अनुगमन नगरेका कारण आफू ठगिएको उनको गुनासो थियो । उपभोक्ताका हैसियतमा आफ्नो दायित्व के हो भन्ने महसुस उनले गर्न सकेनन् ।
उपभोक्ता सम्बन्धी ऐन कानुनका ठेली छन् तर उपभोक्ता आफै सचेत नहुँदा ठग्ने ठगिने क्रम झनै बढेको छ
तनहुँमा स्थानीय गाउँलेले बनाएको झिलिंगा पूजामा प्रसादका रुपमा प्रयोग गरियो । कपडा रङ्याउने रङ प्रयोग गरिएकाले प्रसाद खानेहरु बिरामी परे । रङले राम्रो देखिए पनि अखाद्य वस्तु प्रयोगबारे न बनाउने सचेत भए, न खानेहरु नै ।
हो, बजारमा बग्रेल्ती समस्या छ । सडक छेउका चटपट पसलदेखि नाम चलेका दोकान, होटेल रेस्टुरेन्ट, खाद्यान्न उद्योग जताततै समस्या छ । अनि उपभोक्ता हितसँग जोडिएका ३ दर्जनभन्दा बढी कानुन पनि नभएका होइनन् । तर पनि समस्या २० को १९ हुँदैन । बरु बढेको बढ्यै छ । समस्या के का कारण आयो त ? उपभोक्ता सचेत नभएकाले, उत्पादक, ढुवानीकर्तादेखि बिक्रेताहरु जिम्मेवार नभएकै कारण यो समस्या आएको जगजाहेर छ । तर यसमा मुख्य जिम्मेवार को ? प्रश्नजस्तै उत्तर पनि सहज छ । सबै पक्षले आआफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व वहन गरिदिए यस्ता समस्या आफै समाधान भएर जान्छन् ।
उपभोक्तालाई नै सचेत गराउनुपर्ने महसुस गरेर गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम थालेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय गण्डकीले पोखरा महानगरका ३३ वटै वडाका जनप्रतिनिधि र टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिका लागि सचेतना कार्यक्रम थालेको हो । बुधबार वडा नम्बर ६ देखि १० सम्मका प्रतिनिधि, पत्रकार र उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग अन्तक्र्रिया भएको छ ।
निर्देशनालयका निर्देशक केन्द्र सरकारले बनाएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा टेकेर प्रदेश सरकारले बजार अनुगमन नियमावली बनाएर काम थालेको बताए । अहिलेसम्म सुधारात्मक तरिकाले आफू अगाडि बढेको भन्दै उनले अब दण्डात्मक कारवाही थाल्ने बताए । उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उल्लेख भएका प्रावधानका बारेमा जानकारी समेत गराए ।
उपभोक्ता मञ्च गण्डकी अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले पसलमा सामान किन्न जाँदा उपभोक्ता कम्तीमा पनि उपभोग्य अवधि, उत्पादन मिति, मूल्यजस्ता विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरे । अनुगमन गरेका बेला केही सुधारिएको जस्तो देखिए पनि बजारमा बग्रल्ती समस्या रहेको उनको भनाइ थियो । स्थानीय तहका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन समिति गठन गर्ने र वडाध्यक्षलाई अधिकार प्रत्यायोजन समेत गर्न सकिने भए पनि गण्डकीका सबैजसो जिल्लामा यस्तो हुन नसकेको उनले बताए ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख शिवजी बरालले उपभोक्ताले ससाना कुरामा ध्यान दिए सुधार हुँदै जाने बताए । कार्यक्रममा निर्देशनालयका अधिकृत प्रदीप रेग्मी, पत्रकार पुण्य पौडेल, वडा नम्बर ८ की सदस्य किरण गौतम, अधिकारकर्मी उत्तम जोशी, नेत्र सुवेदी, अधिवक्ता अनन्तप्रसाद कोइराला, शिवालय टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष गिरधारी अधिकारी, महिला उद्यमी पिंगला भट्ट लगायतले उपभोक्ता सचेतनाका बारेमा बोलेका छ । पहिलो चरणमा १ देखि ५ वडाका जनप्रतिनिधि र टोलविकास संस्थाका लागि निर्देशनालयले यस्तै कार्यक्रम गरेको थियो ।